Home » Lahatsoratra farany farany » malaza ankehitriny » Ahoana ny fomba hiatrehana ireo mpanjifa sarotra?
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny ankamaroan'izao tontolo izao dia miaina karazana oram-baratra na fanemorana ny dia amin'ny toetr'andro. Izany dia miteraka mpitsidika romotra ary mila manamboatra isan-karazany ny fandaharam-potoana fitsangatsanganana.
Inona no mahasosotra ny mpanjifa?
Any amin'ny hemisphere avaratra, ny volana Aogositra dia matetika antsoina hoe "andro alika ”amin'ny fahavaratra. Ny anarana dia avy amin'ny zava-misy fa mafana loatra matetika ka na ny alika aza tsy te-hirenireny eny an-dalambe.
Ny faran'ny fahavaratra dia vanim-potoana fizahan-tany ambony ihany koa amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao. Ny indostrian'ny fizahantany dia manantena fa aorian'ny fihenan'ny toe-karena lehibe tamin'ny taon-dasa dia ho lasa fotoana fanarenana ny 2021.
Raha miasa ny vaksinina dia 2021 dia mety ho fotoana feno ny fiaramanidina sy hotely, ary matetika no mitebiteby ny hozatry ny mpitsidika. Ity no volana rehefa toa tsy mandeha amin'ny laoniny ny zavatra matetika, mihoatra ny fanaraha-mason'ny matihanina mpizahatany.
Volana tsara i Aogositra hijerena izay mahasosotra ny mpanjifantsika, ny fomba hitazomana ny hatezerana, ary ny fitazonana ny fifehezana ireo toe-javatra tsy voafehy matetika, toy ny fahatarana mifandraika amin'ny toetr'andro. Miaraka amin'ny fizotran'ny fizahan-tany amin'ny vanim-potoana avo lenta, araraoty ny fahafahanao manandrana ny fahaizanao manodina ireo toe-javatra sarotra amin'ny fahombiazana ary mianatra ny fomba hampihenana ny hatezerana ary hampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Mba hanampiana anao ho tafavoaka velona amin'ity vanim-potoana sarotra amin'ny fizahan-tany ity dia diniho izao manaraka izao:
Tsarovy fa, eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany dia misy hatrany ny mety hisian'ny fifandonana sy tsy fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
Na inona na inona ataonao dia hisy hatrany ireo maniry bebe kokoa na tsy faly amin'ny zavatra ataonao. Ny mpitsidika dia mandoa vola be amin'ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo ary te hahatsapa ho voafehy, na dia amin'ny toe-javatra tsy misy olona fehezina aza. Mamolavola tranga izay ahitan'ny mpanjifa fifehezana na dia kely aza. Ohatra, fa tsy milaza fotsiny hoe misy zavatra tsy vita / tanterahina dia andramo fehezanteny ho valiny mety ho valiny ny valiny.
Rehefa manolotra ireo safidy hafa ireo, dia alao antoka fa ny mpiasa an-tsehatra dia miambina hatrany ary maneho faharetana. Matetika, ny krizy fizahan-tany dia azo esorina tsy amin'ny famahana ny krizy iray manontolo, fa amin'ny alàlan'ny famelana ny mpanjifa hahatsapa fa nandresy fandresena kely farafaharatsiny.
-Mahafantatra ny fetra ara-dalàna, ara-pihetseham-po ary matihanina.
Betsaka ny antony andehanan'ny olona, ​​ny sasany noho ny fahafinaretana, ny sasany ho an'ny orinasa, ary ny sasany ho an'ny toerana ara-tsosialy. Ho an'ireo ao amin'ny vondrona farany, zava-dehibe ny fahafantaran'ny matihanina fizahantany ny tanjaky ny «fijoroana ara-tsosialy ‰. Ireo dia olona mirona tsy te hihaino fialan-tsiny.
Malaky tezitra izy ireo ary tsy mamela heloka. Rehefa mifampiraharaha amin'izy ireo dia fantaro izay mahatezitra anao sy rehefa tonga amin'ny fetra farany azonao ianao. Miezaha ho hendry hahafantatra hoe rahoviana no misedra olana ary ilaina izany fanampiana izany.
Ny fizahantany dia indostria iray manohitra ny fahatsapantsika tena-mendrika. Ny besinimaro dia mety sady mangataka no indraindray tsy rariny. Matetika dia misy fisehoan-javatra izay tsy voafehintsika tsotra izao. Mandritra ireo fotoana ireo dia ilaina ny mifehy ny tahotra sy ny fihetsem-po ao anaty.
Raha maneho hevitra iray ny teninao ary milaza ny iray hafa ny fitenin-tenanao, dia tsy hanana fahatokisana intsony ianao atsy ho atsy.
-Mba mila mpandinika marimaritra iraisana ny fitsidihana.
Ny fizahantany dia mitaky ny hianarantsika ny fomba hanodinana ny fitakiana sy ny filàna tsy misy ifandraisany amin'ny fotoana iray. Zava-dehibe ny hampiofanin'ireo matihanina fizahantany ny tenany amin'ny sehatry ny fanodikodinam-baovao, ny fitantanana hetsika ary ny fiatrehana ny maha izy azy.
Mandritra ny vanim-potoana sarotra, ny olona eo anoloana dia mila mahay mampifandanja ireo fahaiza-manao telo miaraka amin'ny fotoana iray.
-Ny ivom-pizahantany mahomby dia manatanteraka izay ampanantenainy.
Ny fizahantany matetika dia mijaly amin'ny marketing-be loatra ary fampanantenan-javatra mihoatra ny azony atao. Aza mivarotra vokatra izay tsy aroson'ny vondrom-piarahamonina / manintona anao.
Ny vokatra fizahan-tany maharitra dia manomboka amin'ny marketing marina.
-Mba fantatry ny mpitondra fizahantany mahomby amin'ny fotoana tokony hametrahany fanontaniana ny amin'ny toe-panahin'izy ireo. Matetika ny instinky dia manampy be, indrindra amin'ny fotoanan'ny krizy.
Ny fiankinan-doha fotsiny amin'ny voajanahary dia mety hiteraka krizy. Atambaro ny fahalalana voajanahary amin'ny angona sarotra. Avy eo alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra dia alamino amin'ny fomba lojika ireo andiana data roa ireo.
Ny saintsika dia afaka manome ireny fotoana mamirapiratra tsy fahita firy ireny, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ampiasao mba hiorina amin'ny angon-drakitra sarotra sy fikarohana tsara.
-Ny orinasa fizahantany mahomby dia miasa amin'ny famolavolana toe-javatra sarotra fa tsy ny fanjakazahana.
Ny manam-pahaizana manokana momba ny fizahantany dia nahatsapa hatry ny ela ny fifandonana dia toe-javatra very matetika. Ny tena fahombiazana dia tonga amin'ny fahalalana ny fomba hisorohana ny fifanolanana. Mandritra ny fotoana fahatezerana dia miomàna hieritreritra amin'ny tongotrao.
Fomba iray hianarana ny kanto hieritreretana amin'ny tongotra ny fampivelarana ny fifandonana sy ny fiofanana ho azy ireo. Arakaraka ny maha voaofana tsara ny fizahan-tany sy ny mpiasa eo anoloana no mahomby amin'ny fitantanana krizy sy mandray fanapahan-kevitra tsara.
-Mifankahalala amin'ny tontolo miovaova foana ary fantaro ny fomba hikatsahana fotoana amin'ny fotoana sarotra na tsy milamina.
Raha mahita ny tenanao amin'ny fifandonana ianao dia alao antoka fa mitantana azy ianao nefa tsy manindrona ny ego'ny mpanjifanao. Fanamby ny mpanafika anao amin'ny fomba ahafahan'ny mpanjifa tezitra mahita ny hadisoany nefa tsy ho very tarehy.
Aza adino fa ny krizy dia misy atahorana sy fotoana mety hitranga. Mitadiava ny fahafaha-manao isaky ny krizy ara-pizahan-tany.
-Miezaha hanao mpanjifa tezitra ao anatin'ny ekipanao.
Rehefa manandrana mandresy mpanjifa tezitra ianao dia alao antoka fa mitazona fifandraisana tsara amin'ny maso ianao ary mijoroa tsara amin'ny teny roa ampiasanao sy ny fomba fiteninao.
Avelao ny mpanjifa hivoaka voalohany ary hiteny fotsiny aorian'ny nahavitan'ny tsimok'aretina, mamela ny mpanjifa hivoaka, na manao ahoana na manao ahoana tsy rariny ny teniny, dia fomba iray tsara hanehoana fa manaja azy ianao na dia tsy mitovy hevitra aza ianao.
Mampidi-doza ahoana ny dia? Anontanio ny Dr. Peter Tarlow! of SaferTourism:
Dr. Peter Tarlow dia mpiara-manorina ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, fikambanana mpikambana manerantany miaraka amin'ireo matihanina amin'ny fizahantany amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny firenena 127 izay mpikambana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa sy mpikambana dia mandehana any www.tv.travel
Dr. Tarlow koa dia mitarika Safer Tourism, mpiara-miasa amin'ny Vondrona TravelNews ary orinasa mpanolotsaina. Bebe kokoa amin'ny www.fioritsourism.com
‪Admin Relax‬‏ hoy:
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 37